Fahasalamana amin'ny baolina fandroana vita amin'ny tena
Izy rehetra dia mifangaro amin'ny baolina fandroana
Entanina ny fanandramana
Inona no mety ho tsara kokoa amin'ny fikolokoloana ny hoditra sy ny fikolokoloana ny fanahy noho ny fandroana be fandroana hahatsapa ho tsara? Ireo akora mendri-piderana sy tontolo iainana voaravaka am-pitiavana no manova ny kolontsaina fandroana ao an-toerana ho lasa oasis miala sasatra amin'ny fiainana andavanandro mandreraka. Ary izany no antony mahatonga ny baolina fandroana ho hevitra fanomezana mahafinaritra foana ho fanomezana sarobidy ho an'ny fifaliana amin'ny fandroana matsiro.
Omeo baolina fandroana an-trano ho an'ny fahasalamana madio
Baolina fandroana an-trano - © Alliance / Adobe Stock
Indrindra fa avy amin'ny famokarantsika manokana izy ireo. Ary raha tsy mijery ny valiny mahavariana mahavariana ianao, tsy dia lafo tokoa ny famoronana an-trano an-tsaina.
Ny vovon-tsavony efferescent no aingam-panahy
Ny baolina fandroana ara-bakiteny dia manjary mamirapiratra, mifaly amin'ny fahafinaretana rehefa manome hanitra manitra sy essences fikarakarana sarobidy ary koa gel kely kely sy lehibe velona ao anaty rano fandroana.
Ny fika ao ambadiky ny daka miboiboika mahasalama dia tena dioksidan'ny karbôna tsotra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ireo zavatra nofinofin'ny champagne manjelanjelatra na ilay fahatsapana vovoka bitika somary mangidy ao am-bava dia vita. Na ny lohan'ny sombin-kavoana amin'ny labiera vao nipaipaika aza dia tokony hitrandrahana gazy karbonika ampiasaina amin'ny fatra. Mazava ho azy, ny rano manjelanjelatra taloha dia tsy tokony hohadinoina ao anatin'ity toe-javatra velona ity.
Izay rehetra mbola manana fitaovam-pampianarana simia azony dia tadidio fa ny asidra karbonika dia noforonina foana rehefa nifangaro rano ny fangaro soda na asidra citrika kristaly.
Ny zavatra tsara momba azy io: ny soda sy ny asidra citrika dia singa fanaova fahandro mahazatra izay azonao vidiana mora foana amin'ny habetsany takiana ao amin'ny magazay fivarotana enta-madinika. Ary na iza na iza miady tsy tapaka amin'ny fo mahomby amin'ny rano soda dia tokony efa manana soda betsaka ao an-trano.
Ho an'ny baolina telo lehibe na efatra kely dia mila vovo-dronono soda 200 grama ianao, vovoka asidra citrika 100 grama, 50 grama ny zana-katsaka, eo anelanelan'ny 30 ka hatramin'ny 50 grama ny menaka oliva virijina (na "tavy fikolokoloana hoditra" avo lenta hafa), 15 latsaka ny huile essentielle madio mba hanandrana (attention: tsy misy Menaka manitra ary tsy misy menaka manitra!), Fandokoana sakafo ary eritreritra be dia be.
Ny vovoka rehetra sy ny zana-katsaka dia afangaro tsara. Ankehitriny dia ampiana ny menaka oliva ary afangaro tsara ny zava-drehetra. Ny faobe noforonina ankehitriny dia tokony hahatsapa ho mahafinaritra sy malefaka.
Raha mihombo menaka loatra ny koba dia afaka manonitra azy amin'ny vovo-katsaka kely kokoa ianao. Ary raha potipotika loatra ny volo dia misy menaka fihoarana fanampiny.
Rehefa mifangaro ao anaty endrika sy fifandanjana irina ny zava-drehetra dia miloko ny loko sy ny hanitra. Manaraka izany ny sisin-doko haingon-trano mety handro. Izy io dia mety ravina dite, nefa koa felam-bonika maina (tena zava-dehibe: avy amin'ny voninkazo tsy voakolokolo!), Voankazo maina, jirofo na zavatra tsy ampoizina mahafinaritra hafa.
Izao sisa no hataonao dia ny mametafeta ny zavatra rehetra amin'ny endrika baolina, tsara kokoa raha toa ianao mamolavola dumplings amin'ny tanana. Ary avy eo dia vonona hihinana izy ireo, ireo baolina fandroana manitra tsy mahatohitra.
Raha vantany vao resinao ny bibikely mandro mamokatra dia tsy ho ela dia tsy misy fetra intsony ny fifaliana mahita ny fiovaovana vaovao. Satria solon'ny menaka oliva tsara dia azonao atao ihany koa ny mampiasa menaka amandy sy menaka avokado, fa koa dibera kakao na tavy voanio (mora indrindra amin'ny karazany rehetra).
Ary raha ny momba ny hanitra, ny baolina fandroana vita dia afaka mandravaka ny tenany miaraka amin'ny ranomanitra tianao ihany koa. Ny mpivoy sambo aza dia mampiasa «coverture» mihalevona fa tsy matavy. Na tantely mamy. (Saika) avela eto daholo izay rehetra mikarakara sy mahafinaritra.
Ankehitriny, ny fantsom-boaloboka kely dia mila fonosina tsara alohan'ny hamoahana azy ao anaty rano ho fanomezana manitra. Raha tsy te hisaraka amin'ny zavaboarinao manaitaitra ianao dia mazava ho azy fa afaka mamonjy ny fonosana ianao. Ary alefaso ny paompy mafana amin'ny fandroanao manokana mialoha ny fiandrasana.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 25. Oktobra 2020 15. Jolay 2021 Sokajy WellnessKeywords Baolina fandroana, milomano, fandroana, Wellness
indray Lahatsoratra taloha: Ny vorona dia misakafo amin'ny ririnina
more Lahatsoratra manaraka: Manaova fety Halloween